Wararka Maanta: Isniin, May 14, 2012-Munaasabad lagu dhaarinayay Wasiirka Beeraha Soomaaliya oo ka dhacday Xafiiska Afhayeenka Baarlamaanka
Mas'uuliyiin ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali ayaa ka qaybgalay munaasadda dhaarinta iyo wasiirka garsoorka, cadaaladda iyo arrimaha diinta, Sheekh Axmed Xasan Gaboobe ayaa goobjoog ka ahaa dhaarta.
Wasiirka Garsoorka ayaa dhaariyay wasiirka cusub, iyadoo dhaarta kaddib ay halkaa hadallo ka jeediyeen ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Gaas isagoo hambalyo kaddib ku boorriyay wasiirka inuu howsha loo magacaabay u guto si waafaqsan sharciga dalka oo haddana ku dhisan cadaalad.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in lagu jiro xilli lasoo gabagabeynayo ku-meel-gaarnimada ah wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay dowladda kala shaqeeyaan sidii lagu meelmarin lahaa qorshahaas.
Shariif Xasan ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta dowladda in dhameystirka ka bixidda xilliga KMG ah ay dhexda u xirtaan, isagoo ugu baaqay odayaasha dhaqanka inay si dhaqso badan kusoo gudbiyaan magacyada guddiga ansixin lahaa dastuurka.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Xuseen Maxamuud uu yahay shaqsi khibrad leh isla markaana laga rajeynayo inuu xilkiisa ku guto si sharciga dalka waafaqsan.